December 2018 ⋆ Lovely Myanmar
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေရင်ကြားထဲ ထည့်သယ်လာတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး
By Aung Aung on Monday, December 31, 2018
“မြိတ်မြို့ အဝေးပြေး ကားဝင်းသစ်အနီး လမ်းမပေါ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ သယ်ဆောင်၍ ဖြန်းဖြူးရောင်းချသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ”၂၉.၁၂.၂၀၁၈ ရက် ည(၁၀း၃၀) နာရီအချိန်က တနင်္သာရီတိုင်းေ ဒသကြီး မြိတ်ခရိုင် မြိတ်မြို့ မြို့မရဲစခန်း နယ်ထိန်းအဖွဲ့မှ နယ်ထိန်းခေါင်ဆောင် ဒုရဲအုပ် ထွန်းထွန်းနိင် ဦးစီးသော နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးများ နင့်အတူ မြိတ်မြို့ အဝေးပြေး ကားဝင်း အသစ်အနီး ကုန်ဖောက်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ သယ်ယူ၍ လိုက်လံ ဖြန်းဖြူးနေကြောင်း သတင်းအရ. သွားရောက်၍ စောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက် စောင့်ဆိုင်နေစဉ် (၁၆း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အရှေ့သိမ်ကျောင်းဘက်မှ အဝေးပြေး ကားဝင်သစ်အနီး ကုန်းဖောင်းလမ်းမကြီးတွင် မင်္သာကာသူ အမျိုးသမီးနစ်ဦး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မောင်းနင်း၍ လာသည့်ကို့ မြင်တွေ၍ ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူမှာ မအေးအေးမော် (၃၃)နစ် …
အရက်နာမကျအောင် ဘယ်လို အထာကျကျ အရက်သောက်မလဲ?
ရေးသားသူ Ye Myo Myat ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win. ဒီဘက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ အရက်ကို မသောက်ဖူးတဲ့သူဆိုတာ သိပ်ကိုရှားသွားပါပြီ။ လူငယ်တွေ အထူးသဖြင့် ယောက်ျား လေးတွေ အပေါင်းအသင်းတွေ စုံလာတဲ့အချိန်ဆိုရင် အရက်က ၀ိုင်းကို ပိုအသက်ဝင် လာစေ တဲ့ ဆေးတစ်ခွက် လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ အရက်ကို အရင်ကထက် ပိုသောက်လာကြ တာ တွေ့ရတယ်။ လူကြီးတွေဆိုရင်လည်း ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင် ပါတနာ တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာ အများကြီး မဟုတ် တောင် တစ်ခွက်လောက်တော့ မော့ကြတာပါပဲ။ ဒီတော့ မရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် အရက်နာကျခြင်း ညလုံးပေါက် အပြတ်ကဲပြီးလို့ မနက်နိုးလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးကြုံရတဲ့ ပြဿနာကတော့ အရက်နာကျ တာပါပဲ။ …
အဖေ့သမီးလေး အကောင်းအဆိုးကို အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ (မျက်ရည်ခိုင်မှဖတ်ပါ)
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ” တစ်ခါတုန်းက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးလေကို မွေးမွေးပြီး ကတည်းက အလွန်အမင်းကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတယ် ။ သမီးလေး မွေးပြီးလို့ လသားအရွယ်မှာပဲ မိခင်က ဆုံးပါးရှာတဲ့အတွက် မိတဆိုးသမီးလေးဆိုပြီး လိုလေသေးမရှိ ထားခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀ကံနုံချာလွန်းတဲ့အတွက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ့ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေခဲ့ရရှာတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး အပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ် ။ “ အဖေ . . သမီး မြို့မှာသွားပြီးကျောင်းတက်ချင်တယ် ” အားတက်သရော ပြောလာတဲ့ သမီးငယ်စကားကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားခဲ့ရတယ် ။ “ အေးပါသမီးရယ် အဖေပိုင်တဲ့လယ်ကလေးရောင်းပြီး သမီးကို မြို့ကျောင်းထားပေးမှာပေါ့ ” ဆိုပြီးအားပေးစကားပြောဆိုခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်မြို့ကျောင်းကို …
လူမှုကွန်ယက်မှာ လူကြည့်များ ချီးကျူးနေသော “ငလျင်လှုပ်ချိန်မှာ ဇနီးနဲ့ရင်သွေးတို့ လုံခြုံစေရန် ခုန်အုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာစီးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ( ရုပ်/သံ )”
ထိုင်ဝမ်မှာ ပြင်းအား(၆.၄)အဆင့်ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီ (၆)ရက်နေ့ နှောင်းပိုင်းက လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ငလျင်ဟာ ကျွန်းရဲ့ အရှေ့ကမ်းရိုးတန်း (၂၀)ကီလိုမီတာအကွာမှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ ငလျင်ကြောင့်် မြို့တွင်းရှိ အဆောက်အအုံပေါင်းများစွာ တိမ်းစောင်း ပြိုလဲသွားခဲ့သလို Marshal Hotel နဲ့ Beautiful Life ဟိုတယ်တို့လည်း တိမ်းစောင်းသွားတဲ့ ပုံတွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ငလျင်ဖြစ်ရပ်နဲ့အတူ ငလျင်လှုပ်ခတ်ချိန်မှာ မိသားစုကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးလိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း Medium ဆိုတဲ့ သတင်း ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူ့အကြောင်းလေးဟာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလည်း အလွန်ရေပန်းစားနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာ ငလျင်လှုပ်ခတ်ချိန်မှာ အိပ်နေတဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေးကို သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကာကွယ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဖေဖော် ၀ါရီ(၆)ရက်နေ့ညက ထိုင်ဝမ် Hualien မြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ …
သင်ဇာရဲ့ 2018အတွင်း အမိုက်စား ဖက်ရှင်များ စုစည်းမူ
2018အတွင်း လူတိုင်းရင်ခုန်စေတဲ့ ဖက်ရှင်၊ သူများတွေထက် ထူးခြားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ 2018ဖက်ရှင်စုစည်းမူများ . Source သင်ဇာ
မုဒိန်းမှု လျော့ကျဖို့ သူမရဲ့အင်္ဂါကို သူစိမ်းတွေအား ပေးကိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် အမျိုးသမီး
အနောက်တိုင်း အနုပညာဟာ လိင်နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဆီမှာ ဟိုး အရင်ထဲက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ ပွင့်လင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပန်းချီ ပန်းပုတွေနဲ့ အခြား အနုပညာတွေမှာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဟာတွေကို ပွင့်လင်းစွာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာ ပွင့်လင်းမှု ရှိနေရင် မုဒိန်းမှု နည်းပါးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်မှု ဆိုတာ မရဖူး မမြင်ဖူုးတဲ့ အရာကို လိုချင် တပ်မက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကသာ ပုံမှန် ရရှိနေတဲ့ အရာဆို လူရဲ့ ဆန္ဒက 50% နှုန်းလောက် လျော့နည်းနိုင်တယ် လို့ ဆရာဝန်တွေက သုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ …
သင့်ချစ်သူ သင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ အလေးအနက်မထားဘူးဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်တွေ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်။ ချစ်သူနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးက ထင်သလောက်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မိပြီး ချစ်သူအဖြစ် လက်တွဲကြပြီဆိုရင် နားလည်မှုတွေ၊ သံယောစဉ်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ရတာပါ။ ကိုယ်က သူ့အပေါ် အတည်လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် သူကရော ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးရှိသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။ သင်လုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းကို ထောက်ပံ့မပေးဘူး (ထောက်ခံမပေးဘူး) တွဲတာကြာနေပေမယ့် သူ့မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်တွေကို သင်မဆုံဖူးဘူး သင့်အတွက်အချိန်ပေးဘဲ အလုပ်ပဲရှုပ်နေတတ်တယ် သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို မေ့နေတတ်တယ် သင့်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူသင့်အပေါ် အလေးအနက်ထားတယ်လို့ မခံစားရဘူး သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်အကြောင်း ဘာမှမပြောဘူး သင်နဲ့အတူရှိနေရင်းနဲ့ တခြားကောင်မလေးတွေကို ကြည့်နေတတ်တယ် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း သူသင့်အပေါ် အလေးအနက်ထားတယ်လို့ မခံစားရဘူး Credit: MyStyle Myanmar အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါနျော။ ခဈြသူနှဈဦးဆကျဆံရေးက ထငျသလောကျမလှယျကူလှပါဘူး။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြမိပွီး ခဈြသူအဖွဈ လကျတှဲကွပွီဆိုရငျ နားလညျမှုတှေ၊ …
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကျဲသွားတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြလာတဲ့ မိုးဟေကို..
မိုးဟေကို က ပရိသတ်အရှေ့ကို ”ပပဝတီ စီရင်ခန်း” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်. သူမဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေ နားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချော မိုးဟေကို တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဒါရိုက်တာဝိုင်း ရိုက်ကူးမယ့် ”ပပဝတီ စီရင်ခန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်. ”Hello , ၂၀၁၉ ရဲ့ အစမှာတော့ မိုးကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းရိုက်ကူးမယ့် “ပပဝတီစီရင်ခန်း” ဇာတ်ကားလေး ကို ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ ထွန်းထွန်း၊ အလင်းရောင်၊ မိုးနဲ့အတူ ဖွေးဖွေးတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးလေး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ရုံတင်တဲ့ အခါကျမှဘဲ အားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်” …
သင့်လုပ်ငန်းကိုပိုလွယ်စေမယ့် ကီးဘုတ်ခလုတ် ငါးခု
မောက်စ်နှိပ်မယ့်အစား ကီးဘုတ်ကခလုတ်တွေကိုပဲ ရိုးရိုးလေးနှိပ်ကာ သင့်ရဲ့အလုပ်ပိုမိုမြန်ဆန်ပီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာနေ့စဉ် ၈နာရီလောက်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးချနေပြီး မောက်စ်ကိုပဲအသုံးပြုနေတာကြောင့် နှစ်စဉ် ၆၄ နာရီလောက် အလဟာဿဖြစ်ရတယ်လို့ Brainscape မှာ တွက်ချက်ထားပါတယ်။ Copy လုပ်ဖို့အတွက် Ctrl+C နဲ့ Paste လုပ်ဖုိ့အတွက် Ctrl+V ကိုလူတိုင်းလိုသိကြပေမယ့်မသိသေးတဲ့ တခြား Shortcuts တွေများစွာရှိပါတယ်။ ၁။ Redo Ctrl+Z ဟာ Undo လုပ်မှန်းသိကြပေမယ့် Redo လုပ်နည်းကိုတော့မသိကြပါဘူး။ Ctrl+Y ဟာ ၀င်းဒိုးအသုံးပြုသူများအတွက် Redo Shortcuts ဖြစ်ပါတယ်။ မက်စ်အသုံးပြုသူများအတွက်ကတော့ Command+Shift+Z ပါ။ ၂။ Screen Shot of active window ၀င်ဒိုးအသုံးပြုသူတွေအတွက် ကီးဘုတ်မှာ PrtSc ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုအသုံးပြုကာ Screen Shot လုပ်နိုင်ပါတယ်။ …
တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ့် သားသားလေး အိုမဟာ ကို ခရီးလိုက်ပို့တယ် ဆိုတဲ့ ကောင်းကောင်းတို့ဇနီးမောင်နှံ
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ကောင်းကောင်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ကောင်းကောင်း က အဆိုကောင်းရုံသာမက သီချင်းလေးတွေ ရေးစပ်ဖန်တီးရာမှာလည်း တော်သူတစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်အကြိုက်သီချင်းလေးတွေ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ ကောင်းကောင်း က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်း ဘဝကိုအေးဆေးစွာဖြတ်သန်းနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ class=”BD6o3ow7″ style=”margin:0px0px20px; padding:0px; border:0px; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-numeric:inherit; font-weight:normal; font-stretch:inherit; font-size:14px; line-height:inherit; font-family:Zawgyi-One; vertical-align:baseline; color:rgb(0,0,0); letter-spacing:normal; orphans:2text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:rgb(255,255,255); text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial; clear:both; float:left; width:353px;”> ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးပရိသတ်ကြီးအတွက် ကောင်းကောင်း တို့ဇနီးမောင်နှံက သားလေးနဲ့အတူ မိသားစုခရီးထွက်နေတဲ့ …